कतारमा को’भिड-१९ को खोप लगाउन आफ्नो नाम कसरि दर्ता गराउने ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियकतारमा को’भिड-१९ को खोप लगाउन आफ्नो नाम कसरि दर्ता गराउने ?
कतारमा को’भिड-१९ को खोप लगाउन आफ्नो नाम कसरि दर्ता गराउने ?
कतारले अक्टोबर ३१ सम्ममा प्राथमिकताको आधार अनुसार चार चरणमा उपलब्ध गराउने खोप लगाउनको लागि मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ । अहिले खोप लगाउने प्राथमिकताको सुचिमा आफु नपरेपनि नाम दर्ता गर्न सकिने र पालो आएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य केन्द्र तोकेर एसएमएस मार्फत खोप लगाउन बोलाउनेछ ।
हाल अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी ,सम्पूर्ण कतारी नागरिक र ५० वर्ष देखि माथिका आप्रवासी नागरिकलाई खोप लगाउने काम भैरहेको छ । मन्त्रालयको अनुसार डिसेम्बर २३ देखि एक लाख बढी व्यक्तिले खोप लगाईसकेका छन् । खोप सबैलाई निशुल्क रहेको छ र खोप लगाउन हेल्थ कार्ड अनिवार्य चाहिनेछ ।
आज मार्च २३ तारिख मंगलवार कतारमा थप ५३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।देशभरका प्रयोगशालामा ११ हजार ७३८ जनाको नमुना प’रीक्षण गर्दा ५३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोछ भने ३४९ जना निको भएका छन् त्यस्तै आज थप ५५ बर्षिय नागरिकको मृ’त्‍यु भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ ।
आज भाइरस देखिएका मध्ये ४३७ जना स्थानीय र ९७ जना अन्य मु’लुक बाट कतार आएकाहरु हुन् । यो संगै कतारमा भाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएको कुल संख्या १७,४७,६२ पुगेको छ ।आज थप एकको मृ’त्‍यु भए संगै कतारमा हालसम्म भा’इरस बाट ज्यान गु’माउनेको संख्या २७५ पुगेको छ भने र हालसम्म कतारमा नि’को हुनेको संख्या १६,१,१११ रहेको छ ।